ဂျရီ Palumbo ကသူမရဲ့ Impressive Career, eSports နှင့် Audio Mixing of Futures အကြောင်းဆွေးနွေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Jeri Palumbo သူမ၏အထင်ကြီးအလုပ်ရှာဖွေရေး, အီလက်ထရောနစ်အားကစားနှင့်အသံရောနှောအနာဂတ်ကိုဆွေးနွေး
Jeri Palumbo သူမ၏အထင်ကြီးအလုပ်ရှာဖွေရေး, အီလက်ထရောနစ်အားကစားနှင့်အသံရောနှောအနာဂတ်ကိုဆွေးနွေး
ဖြေကအားလုံးကိုစတင်ခဲ့ပြီးဘယ်မှာငါအဓိကလိဂ်အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးထုတ်လွှင့်များ၏တိုက်ရိုက်အသံအင်ဂျင်နီယာနေအသံဖမ်းအင်ဂျင်နီယာ / ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အစီအစဉ်များကိုဖြစ်ခြင်းအထိနည်းပညာဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနီးပါး 30 နှစ်ပေါင်းရှိသည်။ ငါသည်လည်းအိုင်တီနည်းပညာအတွက်နောက်ခံရှိသည်နှင့်တစ်ဦးအဖြစ် dabbled လွန်စွာလိုလားသော အယ်ဒီတာ။ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအမှန်တကယ်အလုပ်သျောရေဒီယိုစီးတီးဂီတခန်းမများအတွက်စျေးကွက်နှင့်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းများ၌ရှိ၏။
ဖြေ Juilliard မှာဖွဲ့စည်းမှု orchestration အဓိကအဖြစ်, ငါက New York မှာသေးငယ်တဲ့ Indie စံချိန်အောင်သူအနုပညာရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ orchestration / အစီအစဉ်လုပ်ဖို့ငှားရမ်းထားခဲ့သည်။ စီမံကိန်းအပေါ်ဂီတဒါရိုက်တာအဖြစ်ငါခြေရာခံ၏ရောနှော-Down နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းများအတွက်အင်ဂျင်နီယာနှင့်အတူထိုင်လိမ့်မယ်။ မျိုး Pro ကို Tools များရန်ရှေ့ပြေးနဲ့တူကွောငျးကိုအသံလှိုင်းခြယ်လှယ် - - ကြောင်းစီမံကိန်းတွင်အပေါ်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး Fairlight သုံးပြီးကြီးနှင့်တကယ့့်ကမ္ဘာကြီးလှု။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲငါ tool ကို၏အမျိုးအစားကြုံတွေ့ငါစိတ်ဝင်စားတယ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ခြေရာခံများနှင့်သံကိုဖမ်းယူခဲ့ကြပုံကို - - ပဲကြင်နာသူတို့အားပတ်ပတ်လည်တွင်အောက်ပါငါအင်ဂျင်နီယာများနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားနှင့်သူတို့လုပ်နေတာခဲ့ကြသည်ဘယ်အရာကိုစောင့်ကြည့်တော့တာပဲ။ အကြောင်း, ငါငါခေါ်ရာပေါ်တက်အဆုံးသတ်ပုံကို "ဖန်ခွက်၏အခြားဘက်ခြမ်း။ " ဖွင့်
ငါပင်ငါလုပ်နေတာခဲ့သည်ကိုသိမတိုင်မီမျှတသောဖြစ်စေရန်, ငါအသံဖမ်းနှင့် "ဟက်ကာနှင့် splicing" တိပ်ခွေကြီးပြင်းလာတယ်။ ဂီတသမားတစ်မိသားစုထံမှဖြစ်ခြင်း, ငါတို့ကအမြဲတ reel-to-reel ရှိခိုးတိပ်စက်ဖြစ်ခြင်း, ပတ်ပတ်လည်အမျိုးမျိုးသောအသံဖမ်းကိရိယာများရွေးချယ်စရာရ၏ ငါနေဆဲယနေ့ပိုင်ဆိုင်တယ်။ ငါကောလိပ်မှပယ်သွားသောအခါနှစ်ရှိပြီ 18, အကြောင်းခြောက်လကနေဖန်ဆင်းတော်တိုင်းတစ်ခုတည်းမှတ်တမ်းတင်ဘို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Q: စိန်ခေါ်မှုများ Audio / ထုတ်လွှင့်အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူငှါလာသလော
A: တကယ်ကိုသင့်ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယသိရန်ရှိသည် - နှင့်သင်သည်သင်၏ပစ္စည်းပစ္စယကိုသိရလျှင်ပင်, ငါအင်ဂျင်နီယာနေဆဲအထီးကြီးစိုးစက်မှုလုပ်ငန်းကြောင့်အမျိုးသမီးများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့များထက်မေးခွန်းထုတ်ပိုပြီးရခံစားရသည်။ ကျွန်မအတွေ့အကြုံ 27 နှစ်ပေါင်းရှိသော်လည်း, သစ်တစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်သို့လမ်းလျှောက်သည့်အခါကျွန်မမကြာခဏတူညီသောအယူအဆမှားရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ငါသည်ဤမှတွေ့ပြီအကောင်းဆုံးအဖြေကို, ကောင်းစွာအကြှနျုပျ၏အလုပ်အကိုင်အလုပျကောငျးတလူတို့နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဝန်းရံနှင့်ဘယ်တော့မှငါ့အအရည်အချင်းများဒုတိယ-ခန့်မှန်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကဤခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. ငါ့ကိုမေးတယ်အခါတိုင်းကျွန်မကိုးကားပေါလုအက်ဖ် Davis က reference: ငါအမှန်တကယ်ကြောင်းအမွငျခွငျးအားဖွငျ့ငါ့အသက်ကိုအသကျရှငျ - ငါကငါ့အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆုံးဖြတ်ချက်များစေနဲ့ကျွန်မမတ်တပ်ရပ် "သင်ကျင်းပနေကြသည်ဘယ်မှာ Go မဟုတ်ဘဲဘယ်မှာမျှသာသည်းခံ။ " က။
Q: အသံနည်းပညာများသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျော်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဘယ်လိုမြင်ပြီလော ဘယ်လိုကဒီအားကစား programming နဲ့သငျသညျအလုပ်မလုပ်သောလမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သလဲ
A: ဝေးပိုမိုရှုပ်ထွေးလာတာတော့ရဲ့; ဖြစ်ရှိအသုံးပြုသောထက် A1 အပေါ် ပို. တာဝန်များကိုရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းကိုကိုင်တွယ်လမ်းကိုကျနော်တို့ကလူစုခွဲလမျး၌သိသိသာသာတိုးတက်ကြပါပြီ - နှင့်သောသူအပေါင်းတို့သည် Calrec ကဲ့သို့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်နှင့်ထုတ်ကုန်မှတဆင့်ခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့်အရာကိုမြော်နှင့်ခြုံ့, ဒါပေမယ့်လည်းချောမွေ့စွာထွက် Matrix မှကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေမသာတဲ့နည်းလမ်းရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့နိုင်ကြောင်းအမှတ်တံဆိပ်တကယ် A1s များအတွက်တစ်နေ့လျှင်-to-နေ့ကကူညီပေးခဲ့တယ်။ ယခုကြှနျုပျတို့ပြည်တွင်း feeds တွေကို, သို့မဟုတ်အခြား feeds တွေကိုအဘို့လုပ်နေတာနေရုံဤမျှလောက်ကျနော်တို့သာမန်အားဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးကြောင်း, ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့ကစတီရီယိုထွက်ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုအခါ, 5.1 ရောသမမွှေများကဆက်ပြောသည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဂီတဖြတ်တောက်မှုများအတွက်တစ်ပြိုင်နက်မျိုးစုံစတီရီယိုရလဒ်ကဆက်ပြောသည်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းလူတစ်ဦးခြင်းဖြင့်ကိုင်တွယ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပြီမယ်လို့ element တွေကိုအများကြီးသိပ်သည်းပါတယ်။ အဆိုပါပြိုင်ကားထုတ်လွှင့်ကမ်ဘာပျေါတှငျ A1 အဘို့ကိုပြောင်းလဲမပေးတော်မူကြောင်းကိုအရာတစ်ခုမှာငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာနေဆဲအပေါငျးတို့သစနစ်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေရေးကမ်ဘာပျေါတှငျသငျသညျခဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စနစ်ဖော်စပ်ထားတဲ့ A1 တွေ့မြင်ပေမယ့်ကျနော်တို့နေဆဲအားကစားအတွက်ကမ္ဘာမှာထုတ်လွှင့်ကြောင်းလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ် ပို. ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည် - ပေမယ့်နည်းပညာ, နှင့်အင်ဂျင်နီယာများသကဲ့သို့ငါတို့သည်လည်းရှည်, ရှည်လျားသောလမ်းလာကြပြီ။
မေး: Calrec consoles စငျသညျထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်းအသုံးပြုကြခြင်းနှင့်အထောက်အကူဖြစ်ရပြီသော standout features တွေသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအချို့ဘာတွေလုပ်နေလဲအဘယ်သို့နည်း,
A: Calrec ရဲ့အာတေမိ console ကိုသုံးပါ - ထို 5.1 ထွက်ကိုညွှန်ကြားငါအော်တိုရောနှောအတူလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုအသုံးပြုရန်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အဘို့အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ငါ့အဘို့, ဒီအင်္ဂါရပ်နိုင်အောင်အလိုအလျောက်ရောစပ်အကြောင်းအများကြီး, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲငါဝေဖန်သုံးသပ် / သတင်းထောက်တွေကိုအကြားအသံအတိုးအကျယ်စစ်ပွဲများနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဘယ်တော့မှဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး, ငါသော console ကိုအပေါ်အလိုအလျောက်ရောနှောနှင့်အတူလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်ငါသိ၏။ အဆိုပါ parametric EQs fader-to-fader ကနေကူးယူနိုင်ပါတယ်, နှင့်အာတေမိ '' Compressor ဒိုင်းနမိုက်ဖြစ်ကြပြီးငါ့အဘို့ချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်မကိုယ်ပွားလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအကြှနျုပျ၏လုပ်ငန်းအသွားအလာအားလုံးကိုအချိန်ကိုအသုံးပြုပါ။ ငါသည်ငါ၏မူရင်းသတင်းရင်းမြစ်များအတွက်နေအိမ်များပါစေနှင့်ကျွန်ုပ်၏ထိပ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်များမှအရာအားလုံး clone ။ ဒါကြောင့်, parametric EQs တို့နှင့်ကြီးသော-မြည် Compressor Calrec ကနေအားလုံးတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော tools တွေကိုကိုယ်ပွား, 5.1 ထွက်ကိုညွှန်ကြား, Auto-ရောနှောပါ၏ ငါသည်ဤလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကိုအသုံးပြုပါ။
ဖြေအီလက်ထရောနစ်အားကစားများအတွက်ရောစပ်တိုက်ရိုက်အားကစားထက်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။ တဦးတည်းအဘို့, နှစ်ခုအကြား Air-ကာလ၌သိသာထင်ရှားသည့်ခြားနားချက်သည်ရှိ၏, အီလက်ထရောနစ်အားကစားတစ်လှည့်လည်၏အရှည်ပေါ် မူတည်. တခါတရံ 12 နာရီ, သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုများအတွက်တိုက်ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အခြား, သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်အီလက်ထရောနစ်အားကစားရိုင်းအနောက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏သော်လည်းတိုက်ရိုက်အားကစား, အတန်ငယ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သောပျော်စရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အီလက်ထရောနစ်အားကစားအများအားဖြင့် Web-based သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်အသံပြေးရှိသည်သောရိုးရာတိုက်ရိုက်အားကစား, နှိုင်းယှဉ်ခြင်း, ထုတ်လွှင့်လုပ်နေလုပ်နေစဉ်မှစလှေတျတျောနှင့်အွန်လိုင်းသိမ်းဆည်းထားခံရအသံ element တွေကိုအများကြီးနှငျ့အတူရှိ၏။ အီလက်ထရောနစ်အားကစားများတွင်ပုံမှန်အသံလုပ်ငန်းအသွားအလာကစားသမားစာသားရာပေါင်းများစွာမှအစာကျွေးရာလေးခုအကြားရှစ်ကစားသမား '' ကွန်ပျူတာများ, ကနေတိုက်ရိုက် output ကိုပါဝင်သည်။ သို့မဟုတျ, အသံသတင်းရင်းမြစ်ကျနော်တို့ကို real-time အတွက်ရယူသောမိုဃ်းတိမ်ထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်။ ဤအရင်းအမြစ်ဂိမ်းများနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အကြားအစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ကျနော်တို့လုပ်ကိုင်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါတလမ်းတည်းအနေနဲ့လေ့လာသူအနေအထားကို / ကွန်ပျူတာ matrix, လွတ်လပ်သောအသံ feeds တွေကိုအပါအဝင်လူအပေါင်းတို့သည်ဖန်သားပြင်ကိုကြည့်နှင့်ထိုသတင်းရပ်ကွက်များအကြားဖြတ်တောက်နေသောလူများ, အပြည့်အဝအခန်းတခန်းထဲသို့အစာကျွေးသည်။ အခြားအချိန်များတွင်ကျနော်တို့ဂိမ်းထွက်ရှိများအတွက် Tricasters (ကခလုတ်ကဲ့သို့ device ကို) မှတဆင့်ရင်းမြစ်ထားတဲ့, ဒါမှမဟုတ်ပင်တိုက်ရိုက်က်ဘ်ဆိုက်ကနေ။
အဆိုပါ A1 အဖြစ်, သင်တဦးတည်းအရင်းအမြစ်သို့အားလုံးအသံစုဆောင်းဖို့တစ်လမ်းထွက်ရှာဖွေတွေနဲ့တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်နေကြသည်။ သူတို့သည်လည်းနှုတ်ဖြင့်အပြန်အလှန်ကြောင့်နားကြပ်တစ်ဦးချင်းစီကစားသမားများအပြင် '' အဖြစ်ကစားသမားတစ်ဦးချင်းစီကနေကြောင်း - - အသံနဲ့ဂီတဂိမ်း၏ AI အသို့ built ဂိမ်းအသံ, သင်ဂိမ်းသူ့ဟာသူကနေအဓိကအသံရှိတယ် '' ။
သောတဦးတည်းအချိန်မရွေးယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ကစားသမားများအလုံးအရင်းတစ်လျှောက်လုံးကျည်များ၏သက်သက်အရေအတွက်ကများမှာ Added ။ ဤအမှုကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်တခါတရံ "demux" ဟုအဆိုပါအသံဖိုင်အလိုတခုတည်းနှင့်၎င်း၏ embedded အရင်းအမြစ်ကနေခွဲထွက်။ တခါတရံငါလေ့လာသူအနေအထားအသံ feeds တွေကိုအသုံးပြုပေမယ့်ပင်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ကျနော်တို့တဦးတည်းလေ့လာသူအာရုံစိုက်သို့မဟုတ်အစားကွဲကွာပုဒ်ထက်စုဆောင်းလျက်ရှိသည်သောရေကူးကန်ကလစ်ပ်နဲ့ audio အသုံးချမှရွေးချယ်နိုင်သည်။
လူအပေါင်းတို့သည်အသံ ins ၏ရှုပ်ထွေးသဘာဝအပြင်, ငါတို့သည်လည်းအစဉ်အလာ 5.1 နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်စတီရီယိုကို formats နှစ်ဦးစလုံးမှရောမွှေပါ။ မကြာသေးခင်ကဂိမ်းဖြစ်ရပ်စဉ်အတွင်း, ငါသည်အစဉ်အမြဲငါကိုငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ကြုံတွေ့ဖူးတဲ့အများဆုံးရှုပ်ထွေးမြင်ကွင်းနှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်; တစ်ပြိုင်နက်တည်းအိမ်တော်ကိုတစ်ခုစွဲငြိဖွယ်ရာပတ်လည် 5.1 ရောစပ်နှင့်ပေးပို့ခြင်းနေစဉ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရောနှောဖို့ ... အဘယ်သူမျှမ Front-၏အိမျနှငျ့အတူ။ ငါကဒီအထူးသဖြင့်ပစ်လွှတ်သည့်အချိန်တွင်ပေးထားခဲ့ option ကိုခဲ့ပါတယ်, ဒါမှားယွင်းတဲ့သွားနိုင်ကြောင်းအများကြီး, ဒါပေမယ့်လည်းမရှိသောကွောငျ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့, ဒီလုပ်ငန်းအသွားအလာ, အစဉ်အမြဲငါကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ Meyer Galaxy ပု Calrec အာတေမိရာမှညွှန်ကြားထိမှန်နှင့်ဇုန်အားဖြင့်ပြိုပျက်အဆိုပါ feeds တွေကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Calrec LA ကအဖွဲ့ထဲကနေအသံလေယာဉ်အမှုထမ်းများနှင့်ထောက်ခံမှုကြယ်သောကြောင့်စွဲငြိဖွယ်ရာပတ်လည်နှင့်အတူတစ်ဦးတည်းတစ် FOH လုပ်နေတာအလုံအလောက်ရှုပ်ထွေးနှင့်ဤပုံစံအလုပ်လုပ်ခဲ့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်မည်ဖြစ်သည်။
ငါပုံမှန်အားဖြင့်ငါဖွယ်ရှိငါ၏အအလွှာ layout ကိုတစ်ဂိမ်းအသစ် On-board ကိုလာတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟု သိ. စောစောဂိမ်း၌ငါ့အလွှာကိုတည်ဆောက်စေ။ ကြှနျတေျာ့လတ်တလောအီလက်ထရောနစ်အားကစားစီမံကိနျးအတှကျငါအာတေမိအပေါ် 12 လိုင်းများ၏ 32 အလွှာခဲ့ခြင်းနှင့်သောစတူဒီယို၌ရှိ၏ထွက်ငါတိုင်းတစ်ခုတည်းဒြပ်စင် layered ။ ငါရောစပ်နေစဉ်အစဉ်မပြတ်ငါကသူတို့ကိုမရရှိနိုင်ခဲ့သောကြောင့်ကာလ၌မဆိုအမှတ်မှာသူတို့ကိုငါ clone နိုင်အောင်ငါအောက်ဆုံးအလွှာအပေါ်စာကြည့်တိုက်၌ထားလေ၏။ ငါအရာအားလုံးကို stacked ခဲ့ပြီးတာနဲ့အရာအားလုံးအောက်ဆုံးအလွှာနှစ်ခုကိုသွားလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်လည်း 5.1 ကြမ်းပြင်သွားတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ transmission အတွက်တင်းကြပ်စွာဆက်ကပ်အပ်နှံတဦးတည်းအလွှာရှိခဲ့ပါတယ်။ ကထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အချိန်ရောက်လာသောအခါ, ငါအလွှာ သွား. လျင်မြန်စွာတက်သော့ခတ်တယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါအဲဒီမှာဒြပ်စင်ခဲ့ကြောင့်မတော်တဆတစ်ခုခုမဖျက်ပစ်မှငါ့ကိုစောင့်ဘဲနေသောကြောင့်, ငါ့လုပ်ငန်းအသွားအလာမှမျိုးစိတ်သစ်ကရှုထောင့်ငါ့ကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအချိန်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။
ဒီကျနော်တို့အိမ်၏အဘယ်သူမျှမရှေ့နှင့်အတူကြမ်းပြင်တစ် 5.1 ရောနှောပြေးကြ၏ရှိရာတစ်ဦးပုံမှန်မဟုတ်သောအခွအေနေခဲ့စဉ်ကတည်းကထို့အပြင်ငါမလိုအပ်တဲ့စနစ်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ငါလုံးဝထွက်ကျိုးပဲ့ကြမ်းပြင်မှကိုအဓိကအားထား၏တဦးတည်းအလွှာ 5.1 ခဲ့ပြီးတော့ငါငါ့အလိုရှိသမျှကိုအဓိကအားထားနိုင်အောင်ငါလုပ်ခဲ့သမျှသောတဦးတည်း fader ရွှေ့ခဲ့သည်အခြားအခန်းတွင်ပြိုကျခဲ့သောငါဆဲ Calrec တိုက်ရိုက်မှတဆင့်ငါ့အ 5.1 စပီကာများအားလုံးနှိပ်ခံရမယ်လို့ 5.1 output ကိုအင်္ဂါရပ်။ လိုအပ်လျှင်တနည်းအားဖြင့်ကျနော်, စက္ကန့်အတွင်းတစ်ဦးချင်းကြမ်းပြင်သို့မဟုတ် 5.1 တိုက်ရိုက်ထုတ်ဖို့ကထွက်ရပ်တနိုင်ဘူး။ အချိန်မရွေးတစ်စုံတစ်ယောက်ငါချက်ချင်းရှိသည်မယ်လို့, စေလွှတ်မည်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားစပီကာအပေါ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပင်စည်အဘို့အကြှနျုပျကိုမေးမွနျးသောကွောငျ့ငါ backup လုပ်ထားအစီအစဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
မေး: သင်အာတေမိကို အသုံးပြု. သင်၏ workflow အကြောင်းကိုမဆိုထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာကိုမျှဝေနိုင်ပါသလား?
ဖြေတောက်ပသောအာတေမိနှင့်ပတ်သက်ပြီးအချို့တကယ်ထူးခြားတဲ့အမှုအရာရှိပါသည်။ ဒါက Auto-ရောနှောပါဝင်သည် (နှင့်အတူဆော့ကစားရန်ကြောက်လန့်ဖြစ်ခြင်းမပါ) တို့နှင့်ကြီးသော-မြည် parametric EQs နှင့်ကွန်ပရက်ဆာ, ဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့, အကြီးမားဆုံး "ဟု-ဟက်တာ" Calrec ထွက်သည်၎င်း၏ matrix ကိုမလမ်းဖြစ်၏။ ငါ IFB မျိုးစိတ်သစ်ကအင်္ဂါရပ်များနှင့် 5.1 တိုက်ရိုက်တနေရာနှင့်အတူငါရှိခဲ့ပို့ပေးမည်မျှနှင့်အတူတကယ်ဖန်တီးမှုရဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်မအဖြစ်အများအပြား IFB စုစုပေါင်းကို set up နဲ့ကျွန်မတတျနိုငျသအဖြစ်အသံ feeds နဲ့ကျွန်မသာဂိမ်းလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီတစ်ဦးချင်းစီမှထွက် Matrix ချင်ပါတယ်။ ငါ့အဘို့မရှိ, ကိစ္စလျှောက်လွှာ, ငါဖြစ်နိုင်သည်က IFBs င်ဖြစ်စေ, တက် conjure နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းဘို့အဆင်သင့်အပေါ်သူတို့ကိုရှိသည်နိုင်သောရှုထောင့်နဲ့ငါ့ရှိုးတည်ဆောက်, ကြမ်းပြင်-ပို့ပေးသို့မဟုတ်အခြားတောင်းဆိုချက်။
အီလက်ထရောနစ်အားကစား၌ငါမကြာခဏကျနော် 5.1 တစ်အလွှာစောင့်ရှောက်ပေမယ့်, ငါ့ကိုမယ့်အစားတစ်ဦးချင်း-pack ကိုအဓိကအားထားသို့ထွက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ရှိခြင်း၏တဦးတည်းလမ်းကြောင်းကိုချတဲ့ 5.1 ထွက်ပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုပေးသော Calrec ကနေထွက်တိုက်ရိုက် 5.1 မှာအားလုံးအဆင်သင့်ကိုအဓိကအားထားဘူး ကြိမ်အဖြစ်ကောင်းစွာ။ သင်တစ်ဦးထုတ်လွှင့်လုပ်နေလုပ်နေနေစဉ် 5.1 စွဲငြိဖွယ်ရာရောနှောလုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အဘို့, တစ်တောက်ပ option ကိုပါပဲ။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါပြပွဲတစ်လျှောက်လုံးကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုစောင့်ရှောက်, ငါသာတစ်ဦးချင်းစီထုတ်လွှင့်အကြားထိပ်အလွှာကိုထိန်းညှိဖို့ရှိသည်။
မေး: သင်အားကစားရောစပ်၏အနာဂတ်လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်းသွားတွေ့မြင်ကြဘူးဘယ်မှာရှိသနည်း လူတွေအသံရောထွေးကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်ဟုမဆိုခေတ်ရေစီးကြောင်း?
အမှုအရာဒစ်ဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲဖို့ Analog စရှိကြ၏ဘယ်လိုဆင်တူ IP ကိုတစ်ဦးအလွန်ရှင်းလင်းသောပြောင်းကုန်ပြီ, ရှိပါတယ်။ အဆိုပါနည်းပညာနှင့် Workflows ပို. ပို. အဆင့်မြင့်ဖြစ်လာရသည်။ ဒေသခံစံနှုန်းပြုထားသော IP ကိုကွန်ရက်ယခု On-site ကိုအပြည့်အဝန်ထမ်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖျက်သိမ်းရေး, ကင်မရာများ, အသံများနှင့်အမျိုးမျိုးသောသည်အခြားအစိတ်အပိုင်းများအဘို့, ဆိုက်သူ့ဟာသူမှာကို set up လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါနည်းပညာကိုလှည့်ပတ်ခဲ့ပေမယ့်ယခုတစ်ဝေး သာ. ကြီးမြတ်ပိုမိုခေတ်မီပြီးအသိဉာဏ်အဆင့်မှာသုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပေးပို့ IP ကိုကူးပြောင်းသည်နှင့်ပြည်သူများကိုယခုငါတကယ်ကအစဉ်အမြဲရုပ်မြင်သံကြားရှုခင်းကိုပြောင်းလဲသွားမယ့်ထင်ရှိရာအမှတ်ကွောငျး၏အားသာချက်ကိုယူပြီးဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးတို့ကိုရှိပါသည်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့ယခုအကြောင်းအရာ access လမ်းကိုကြည့်ရှု - အပြောင်းအလဲကိုဤနေရာတွင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
2015 A1 A1 အသံအင်ဂျင်နီယာချုပ် အသံအော်ပရေတာ (A1) လွန်စွာလိုလားသော ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Calrec အသံ အီလက်ထရောနစ်အားကစား ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် UHD / 4K / HD ကို viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Warsaw ကို 2019-07-17
ယခင်: ဘင် Hausdorff Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K နှင့်အတူ Pentatonix နှင့် New Kirstin Maldonado ပါ Music Videos ရိုက်
နောက်တစ်ခု: MTI ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကြောင်း AIDS ရောဂါ Dolby Vision ၏ HDR ကိုထုပ်ပိုး Tool ကိုများအတွက်မူပိုင်ခွင့်ပါသညျ